Waaberi oo ku guuleysatay tartanka ciyaaraha degmooyinka Gobolka Banaadir - Qotoqoto
Posted on September 9, 2017 by qotoadmin
Waxaa Xalay lagu soo gabagabeeyay garoonka Banaadir ee degmada C/casiisee Magaalada Muqdisho,tartanka Degmooyinka Gobolka Banaadir oo muddooyinkii dambe si xiiso leh uga soconayey Magaalada Muqdisho.
Tartankan oo ay final-kiisa wada ciyaareen labada degmo ee Waaberi iyo Hodan, ayaa wareegii 1-aad ciyaarta waxay ku soo dhamaatay Waaberi 2-0 Hodan.
Kooxda kubadda cagta ee Waaberi ayaa Xalay loo caleema saaray horyaalka degmooyinka gobolka Banaadir, waxaana sanadkii hore tartanka degmooyinka gobolka Banaadir ku guuleysatay degmada Boondheere, oo ka qaatay Waabari.
Sikastaba 28- Agoosto 2014 ayey aheyd markii degmada Waabari ay finalka la ciyaartay Xamar Weyne, iyadoo Waabari looga adkaaday 2-0, si lamid ah sanadkii xigay 2015 ayaa waxaa Wabari 1-0 ugu qaaday Boondheere.
Previous PostPrevious Ammaanka Magaalladda Baydhabo oo la adkeeyay kaddib Qarax shalay ka dhacay Magaalladda
Next PostNext Amiirka Qatar iyo dhaxal-sugaha boqortooyada Sucuudiga oo ka wada-hadlay xiisadda Diblomaasiyadeed